आत्महत्या गर्ने ८० प्रतिशतको मुख्य कारक डिप्रेसन अर्थात मनोरोग ! « News24 : Premium News Channel
आत्महत्या गर्ने ८० प्रतिशतको मुख्य कारक डिप्रेसन अर्थात मनोरोग !
काठमाडौं, २५ भदौ । नेपालको आत्महत्याको तथ्यांक कहालीलाग्दोरुपमा बढ्दै छ । विश्वमा नै नेपाल आत्महत्या गर्ने मुलुक मध्ये सातौ स्थानमा उभिएको छ । कारण र निदानमा मानसिक रोग मात्र भएको निष्कर्ष निकालिए पनि आत्महत्याको अन्य कारणहरु भने खोजिन बाँकी नै छ ।
आत्महत्या रोकथाममा सबैको सहकार्य भन्ने नारा सहित सोमबार विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाइएको छ । नेपालमा प्रत्येक दिन औसत १४ जना मानिसले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्यांक छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपाल आत्महत्या गर्ने मुलुकमध्ये सातौं स्थानमा पर्दछ । चिकित्सकहरुले आत्महत्याको प्रमुख कारण मानसिक रोग रहेको बताएका छन् । २०७४ ÷ ०७५ मा प्रहरीको रिपोर्ट अनुसार नेपालमा ५ हजार ३ सय ४६ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।
विगत ५ वर्षदेखि नेपालमा आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । प्रत्येक वर्ष आत्महत्या गर्नेको संख्यामा कम्तीमा पनि १३ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ । त्यसो त नेपाल मात्रै नभई संसारभर नै आत्महत्याको अवस्था डरलाग्दो छ । विशेषगरी युवा तथा किशोर किशोरीहरु आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संघको रिपोर्ट अनुसार प्रत्येक वर्ष संसारका नौ देखि १० लाख मानिसहरु आत्महत्या गरेर ज्यान फाल्छन् । मनोविद्का अनुसार उत्साह, उमंग, आशा, भरोशा मर्दै गएपछि मानिसमा निराशा भारी बन्छ । त्यही निराशा, एक्लोपना र बेचैनीले आत्महत्या रोज्न लगाउँछ । आत्महत्याको बिचार आउनु मानसिक रोगको लक्षण हो ।
धेरै कारणहरुले मनमस्तिष्कमा स्नायु रसायनहरु, विशेष गरि सिरोटोनिन र नरएड्रिनालिनमा गड्बडी आउने गर्छ । यसबाट ब्यक्तिको अनुूभूति, सोंच, भावना, ब्यवहार लगायत् शरीर र मनमस्तिष्कका अनेकौं कार्यहरुमा समस्या उत्पन्न हुनपुग्छ । आत्महत्याको प्रयास गर्ने ९० प्रतिशत भन्दा बढी मानिसहरुमा उदासिन मनोरोग डिप्रेसन आत्तिने रोग एनजाइटी , लागूपदार्थ सेवन, ब्यक्तित्वको गम्भीर गड्बडी जस्ता कुनै न कुनै मनोरोगहरु देखिन्छन् ।
नेपालमा हुने कुल आत्महत्यामध्ये ९० देखि ९५ प्रतिशत मानसिक रोगका कारणले हुनेगरेको चिकित्सकको भनाइ छ । त्यसमध्ये ८० प्रतिशतले डिप्रेसनको कारणले आत्महत्या गरेको पाइन्छ । यदी तपाईलाई आत्महत्या गर्ने बिचार आयो भने सोच्नुस् की तपाइँलाइ मानसिक रोग छ र यसको उपचार गर्न अत्यन्त आवश्यक छ यसको लागि मनोचिकित्सकको परामर्श तपाईले ढिलाई पनि गर्नु हुन्न ।